Air Senegal waxay lashaqeysaa Amadeus
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air Senegal waxay lashaqeysaa Amadeus
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • War-Saxaafadeed • Waajib ah • Wararka Senegal • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Maaddaama Air Senegal ay dib uga bilaabayso adeegyadii gobolka, shirkaduhu waxay xooga saarayaan otomaatiga, iyo macluumaadka ku habboon, waqtiga dhabta ah.
Maaddaama Air Senegal ay dib uga bilawday adeegyadii gobolka Galbeedka Afrika, shirkaddu waxay xooga saaraysa otomaatiga, iyo macluumaadka ku habboon, waqtiga dhabta ah.
Aqoonsiga in hal-abuurnimadu ay fure u tahay soo kabashada warshadaha duulimaadka, duuliyaha calanka Senegal ee Air Senegal wuxuu iskaashi la yeeshay Amadeus
Air Senegal ayaa dib u bilawday adeegii ay ugu laabanaysay xaalad fiditaan
Aqoonsiga in hal-abuurnimadu tahay furaha guusha dib u soo kabashada warshadaha duulimaadka, duuliyaha calanka Senegal ee Air Senegal wuxuu iskaashi la sameeyay Amadeus si loo hirgeliyo Altéa Suite oo ay ku jiraan Nidaamka Adeegga Rakaabka oo buuxa (PSS).
As Hawada Senegal wuxuu dib u bilaabay adeegyadii gobolka, side wuxuu xooga saarayaa otomatiga, iyo macluumaadka ku habboon, waqtiga-dhabta ah. Nidaamka Adeegga Rakaabka ee Amadeus Altéa (PSS) wuxuu ku bixiyaa cunsurradan iyadoo loo marayo boos celin buuxda, liis garayn, iyo awoodaha xakamaynta bixitaanka. Waxay sidoo kale u saamaxdaa shirkadda diyaaradaha inay taageeraan socdaalka inta ay ku jiraan safarkooda, iyagoo siinaya waqti-dhab ah, digniino shaqsiyeed si ay ugu wargeliyaan isbeddelada duulimaadyada, adeegyada, ama dalabyada shaqsiyeed. Nidaamku wuxuu ka caawiyaa shirkadaha dayuuradaha inay u qaabeeyaan adeegyada rakaabka waxayna si dhakhso leh oo fudud u helaan hababka hubinta.
Haddii ay dhacdo carqalad, shirkadda 'Altéa PSS' ayaa u oggolaan doonta Air Senegal inay dib u dejiso rakaabka daqiiqado gudahood. Haddii daqiiqad ugu dambaysa isbeddel diyaaradeed ay dhacdo, shirkaddu waxay awoodi doontaa inay isla markiiba oo ay si otomaatig ah dib ugu cusbooneysiiso rakaabka una hagaajiso miisaanka iyo culeyska culeyska. Iyadoo la adeegsanayo dhamaadka-dhamaadka dhamaadka diyaaradeed otomaatiga ah iyo dib u qaabeynta, diyaarada waxay iska ilaalin doontaa ku lug lahaanshaha gacanta ee qaaliga ah, waqtiga badan iyo kheyraadka kuxiran.
Air Senegal waxay ku jirtay xaalad fiditaan caalami ah oo deg deg ah markii masiibada ku habsatay. In kasta oo uu faafaa, shirkaddu waxay weli qorsheyneysaa inay laba meelood oo Yurub ah ku darto faylalka ay sii kordheyso, iyo sidoo kale duulimaadyada tagaya meelo kala duwan oo Afrika ah. Waxay sidoo kale dhawaan maalgashi ku sameysay diyaarad casri ah sideed Airbus A220-300s oo laga dalbaday Dubai Air Show sanadkii 2019.
Mamadou Ba, Agaasimaha Fulinta Waxqabadka iyo Adeegyada Taageerada ee Air Senegal, wuxuu yiri: “Maadaama aan nahay mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada ugu dhaqsaha badan Afrika, Air Senegal, waxaan higsaneynaa inaan noqono hogaamiyaha gaadiidka cirka Galbeedka Afrika anagoo ku tiirsaneyna xudunta gobolka. Waxaan ku dadaaleynaa qancinta macaamiisha iyo heer sare ee howlgalka, waxaana aaminsanahay in iskaashiga aan la leenahay Amadeus uu noo oggolaan doono inaan ka soo baxno dhibaatada ka jirta COVID-19
Maher Koubaa, Madaxweyne kuxigeenka Fulinta ee Duulimaadyada Bariga Dhexe, Turkiga & Afrika at Amadeus, ayaa intaa ku daray: “Waxaan ku faraxsanahay inaan iskaashi la wadaagno Air Senegal wadadeeda soo kabashada. Waa dhiirigelin in la arko firfircoonida diyaarad noocan oo kale ah oo cusub marka ay timaado la qabsiga iyo qorsheynta mustaqbalka. Dhamaanteen Amadeus waxaan rajeyneynaa inaan gacmaha is qabsano oo aan la shaqeyno side si aan u dabaqno awooda teknoolojiyadeena maadaama aan ka shaqeyneyno inaan caqabadaha u bedelno fursado. ”
Diyaaradda Air Tanzania ayaa amartay diyaarad Boeing oo xamuul iyo rakaab ah...
Israa'iil ayaa mamnuucday dadka ka imaanaya todobo waddan oo ku yaalla koonfurta...